Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 15/12/2019)
Yenza okuhle kwe-nenkathi ebandayo ngokuvakashela Kuhle Winter Imikhosi eYurophu. Imikhosi ehilela konke kusukela Ukushushuluza kanye nokushova ukuze umculo, amahlaya, ice ukubaza, futhi siyakhazimula zomkhosi yamathanga. Ngezansi phezulu yethu 5 roundup lokho uzothola kwenzekani kulo lonke elaseYurophu ngoJanuary Februwari.
Ake uqale nge Winter Imikhosi eYurophu, kanye nokuvala siya Scotland
Edinburgh Hogmanay kuyinto omunye engcono okusha ngonyaka Imikhosi emhlabeni, zasendle ngempela futhi Wooly zangaphansi isikhathi. Hogmanay iyizwi Scottish ngoba Usuku lwangaphambi koNyaka Omusha futhi Edinburgh sika Hogmanay umkhosi isibe enye yezindawo ezinkulu kakhulu imikhosi kaNcibijane emhlabeni. Hogmanay Edinburgh sika komkhosi wezinsuku ezingu-3 egcwele izenzakalo ezifaka udwendwe torchlight, bukhoma amakhonsathi omculo, izenzakalo umndeni, okukhulu eceleni emgwaqweni, ukudansa, iziqhumane, futhi ngisho umbukiso Costumed ukuthi iphela cwilisa abandayo emfuleni!
yaseLondon Hyde Park Winter Wonderland ubuyela Hyde Park e 2018 nge elikhazimulayo ice rink yayo, omkhulu emakethe Christmas futhi ugibele kumnandi igcwele. Qiniseka ukuthi bathathe imali kanye sokufika kusenesikhathi ukugwema uphuthelwa ugibele ezimangalisayo bangathengisa out okusheshayo! Winter Wonderland kuyinto elidume ethandwa, futhi asikwazanga uhlu Winter yethu Imikhosi Kuhle eYurophu ngaphandle kokukhuluma ke!
Ukukhanyisa i izinsuku amnyama kanye nobusuku Luxembourg City kuyinto Winterlights Luxembourg. Imisebenzi eminingi kanye nemicimbi okuthengiswako wonke umndeni, le izimakethe kaKhisimusi ahlale intandokazi eqinile! Ungalindela izimpahla ngezandla, izingubo, amathoyizi, izesekeli futhi yebo (esizithanda) okunungi kwe Ukudla okumnandi olulindele ezokunambithwa! Kusukela bendabuko “amazambane Kichelchen” ukuze flavour exotic okuningi kusuka izindawo akude, khona nakanjani okuthile kwawo wonke umuntu.
The best way to experience this pick of Winter Festivals in Europe is to visit the water exhibition is ngesikebhe. izinkampani Canal cruise ukunikela Cruises ekhethekile guided eduze wobuciko. I Amsterdam Khanyisa Festival Cruise kuthatha 75 amaminithi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)